Rap ဂီတ & ဘာသာ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
Rap ဂီတ & ဘာသာ
နေသမျှကာလပတ်လုံးငါမှတ်မိနိုင်သကဲ့သို့, ဟစ်ဟော့ဘုရားသခင်နှင့်ဘာသာတရားနဲ့စွဲရှိခဲ့ပါတယ်. ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအဆိုတော်တွေဘာသာရေးသိုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုဖို့ဆိုလိုဘူး. သို့သော်အနည်းငယ်အဆိုတော်တွေဟာ - သို့မဟုတ်ကကိစ္စဆိုအနုပညာရှင်တွေ - သူတို့ရဲ့အနုပညာအတွက်တစ်နေရာရာမှာဘုရားသခင့ပါဝင်ဖို့နေတာဆိုတော့ကိုလှုပ်နိုင်. ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်အကြောင်းပြောဆိုရန်အဘို့အဒါဟာသဘာဝကနှင့်ကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြောနေ? တချို့ကဆိုရလိ​​မ့်မည်, "ဒါဟာကိုယ့်ဂီတရဲ့. ဒါကြောင့်အလေးအနက်ယူမနေပါနဲ့!” သို့သော်လည်းအဘယ်သို့တဲ့ရက်ပ်မိုက်ကရိုဖုန်းပေါ်ကပြောပါတယ်သင်ထင်စေခြင်းငှါထက်ပိုမိုလေးနက်သောဖြစ်ပါသည်.
တချို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းဘာသာရေးယုံကြည်ချက်သို့မဟုတ် သိ. မရှိခြင်းဖော်ပြဟစ်ဟော့အသုံးပြုခဲ့ကြ. အစ္စလာမ်ဘာသာ, အဆိုပါငါးရာခိုင်နှုန်း, ခရစ်ယန်ဘာသာ, Agnosticism, ဘုရားမရှိဟူသောအယူ, နှင့်အခြားဘာသာတရားအားလုံးအနုပညာပုံစံကိုတဆင့်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြ. ငါဟစ်ဟော့ကျနော်တို့အကြောင်းကိုအသည်းအသန်ပါပဲဘာမှမှသစ္စာရှိမှုနှင့်ဆည်းကပ်ဖော်ပြထူးခြားသင့်လျော်သည်ထင်. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဆွဲဆောင်မှု rawness နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟစ်ဟော့ကိုပိုပြီးစကားသည်အခွင့်ပြုထားသောကြောင့်,, ဤသို့သင်အမှန်တကယ် "သွန်သင်နိုင်ပါတယ်။”
သို့သော်အချိန်ဟစ်ဟော့အများစုပိုနင်္ဂနွေနေ့ကျောင်းမှအတန်းအစားထက်တစ် barbershop ကဲ့သို့ဖြစ်၏. အဆိုတော်တွေဟာမဆငျမခွခံတွင်းမှာချွတ်ပြေး, သူတို့အကြောင်းပြောနေတာသို့မဟုတ်မနေအရာကိုသိရှိမရှိ.
ရိုးသားမှု vs. သတိမထားသော
တစ်ခါတစ်ရံတွင်လှဲမှားသောသော်လည်း - - ရှာဖွေနှင့်သစ္စာနှင့်အတူရုန်းကန်အဘယ်သူ၏ Rhymes တစ်စိတ်ရင်းကိုထင်ဟပ်အချို့ရှိပါတယ်. ငါလေးစားလိုက်နာ. One ၏ထင် အဆိုပါမြစ်များ ' "ချစ်ခင်ရပါသောဘုရားသခငျသညျ 2.0,” ရေငတ်သို့မဟုတ် Kendrick Lamar ရဲ့ "သေဆုံး”.” *ငါသည်သူတို့၏ယူဆချက်သို့မဟုတ်ကောက်ချက်နှင့်အတူသဘောမတူလျှင်ပင်, ငါစိတ်ရင်းမှန်လှည့်လည်နားထောင်ပြီးမှေ့လျြော. ထိုသို့မကြာခဏငါ၏အခငျြးကို emcees အဘို့ဆုတောင်းကြလော့ဖို့ကျွန်မကိုလှုံ့ဆော်ပေး.
hip-hop အမြဲသော်လည်းတစ်မဲမှောင်ဘက်ခြမ်းရှိခဲ့ပါတယ်, အနုပညာရှင်တွေကိုမလေးစားနဲ့ irreverence နှင့်အတူဘုရားသခင်နှင့်ဘာသာရေးကိုပြုမူဆက်ဆံဘယ်မှာ. အဆိုတော်တွေဟာစကားလုံးများကိုယခုအချိန်တွင်၌တရားခံစားရသမျှကိုပွောဆိုဟန် - သူတို့ကတကယ်တော့သူတို့ကိုယုံကြည်သို့မဟုတ်မဖြစ်စေ. ထိုအခါ "Post-ခရစ်ယာန်အတွက်” ငါတို့ကဲ့သို့လူမြိုးတစျမြိုး, ဤသူဇောစော်ကားမှုများသောအားဖြင့်ယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့ဘုရားကျောင်းမှာရည်ရွယ်နေကြပါတယ်.
ဒါပေါ့, အချို့သောအမှုအရာရှိပါတယ် - လျှို့ဝှက်နှင့်ငွေဆာလောင်မွတ်သိပ် "တရားဟောဆရာတူ” - မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်ခံရဖို့ထိုက်ကြောင်း. သို့သော်ဝမ်းနည်းစွာ, ကမျြးစာကို, အသင်းတော်ကို, နှင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်မကြာခဏစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းအတွက်အရေးမပါဇာတ်ကောင်များကဲ့သို့ဆက်ဆံကြသည်. ငါဝန်ခံ, ကြားနာအဆိုတော်တွေဟာ freaky "အကြောင်းပြောဆို” မိန်းကလေးများအသင်းတော်ကို choir ၌ငါ့ကိုအောက်မှာစေသည်, ဒါပေမဲ့ဘာမှမပိုပြီးသညျယရှေုကိုယ်တော်တိုင်အားပျက်ရယ်ပြုထားထက်ငါ့ကိုဝမျးနညျး.
အများစုကအဆိုတော်တွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဘုရားသခင့ခေါ်ပြီ, ယေရှုနှင့်အတူတစ်ဦးအဆင့်တွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတင်, နှင့် boastfully အချည်းနှီးသခင်ဘုရား၏နာမတျောတို့ကိုယူကြပြီ. သူတို့က irreverent ဘာသာရေး themes များပတ်ပတ်လည်မြေတပြင်လုံးအယ်လ်ဘမ်ကိုတည်ဆောက်မယ့်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကဲ့ရဲ့မှသူတို့၏ဘုရားသခင်ပေးသောဖန်တီးမှုအသုံးပြုပါတယ်. ဘယ်လိုမထင်မှတ်.
ယေရှု၏နောက်လိုက်တစ်ဦးအဖြစ်, ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါနားထောင်ဘယ်သို့သောအားဖြင့်ပြစ်မှားနေပါတယ်, အဲဒီစော်ကားစကားသည်စျောသူများအတွက်ဝမ်းနည်ထက်ဒါပေမဲ့ပိုပြီး. ငါတို့ရှိသမျှသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏မျက်နှာ၌တံတွေးထွေးင်သူတစ်ဦးသည်လူအဘို့ကြောက်ကြလိမ့်မယ်, ငါတို့မူကားအနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏မျက်နှာ၌ spits သူတစ်ဦးသည်လူအဘို့ ပို. ပင်ကြောက်လန့်ဖြစ်သင့်.
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုငါတုံ့ပွနျသငျ့? ငါသည်သူတို့၏ဂီတသပိတ်မှောက်ကြဖို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုစတင်နိုင်. သို့မဟုတ်, တစ်ရက်ပ်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်, ငါအသက်အရွယ်များအတွက်ပက်ပက်စက်စက် diss စံချိန်ကိုရေးသားနိုင်. ငါသည်သင်တို့ကိုသူတို့အားချဉ်းကပ်၏တစ်ခုခုကိုမှန်တယ်မှားတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ကြကုန်အံ့ပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသား, ငါသူတို့အစစ်အမှန်ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အများကြီးပြုပါမယ်လို့မစဉ်းစားကြဘူး.
ဤအအဆိုတော်တွေဟာလွှတ်ပေးရန်အဆိုပါဂီတသူတို့၏စိတ်နှလုံးတစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါသည်. ငါတို့စကားကိုအမြဲကျွန်တော်တို့ကို၏အတွင်းပိုင်းအပေါ်င့်အဘယျသို့တစ်စုံလင်သောရုပ်ပုံများမှာ. ရေသို့မဟုတ်ဖျော်ရည်ကိုတစ်ဖန်ကိုင်ပြီးစဉ်သငျသညျအစဉျအမွဲ tripped ဖူး? ဘာပဲသင်ဖန်ရှိမြေပြင်ပေါ်သို့ထွက်တွေဆီကိုကူးစက်. ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည့်အတိုင်း, ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးရိုးကားရားအရည်ထုတ်လုပ်မပါဘူး, ဒါကြောင့်ပဲဖန်ရဲ့အဘယျအကျွန်တော်တို့ကိုပြသထားတယ်. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားနှင့်တူညီသောအရာပါပဲ. ငါတို့သည်စကားပြောကြတဲ့အခါမှာ, သို့မဟုတ်ရက်ပ်, ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုများ၏ content ထွက်ဖိတ်သည်. မိန့်ခွန်းများနှင့်ဂီတကျွန်တော်တို့ကိုအပွစျရှိလုပ်မထားဘူး, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတို့ကိုထဲမှာဘာဖော်ထုတ်ပါဘူး (မဿဲ 12:34).
ကြောင်း၏အလငျး၌, ဘာသာရေး themes များတက်ယူသူကအဆိုတော်တွေဟာအခြို့ကိုနားထောငျအကြှနျုပျကိုအရာနှစ်ခုကိုပြောတယ်.
ပဌမ, သူတို့သညျယရှေုသောသူသည်နားလည်ကြပါဘူး. သူတို့အမှုကိုပြုလိုလျှင်, သူတို့ကိုယ်တော်၏ဤအလမ်းပွောဆိုဘယ်တော့မှ. ဒါပေါ့, သူတို့သညျယရှေုနှစ်ထောင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်သောဂျူးသူဖြစ်၏သိ. ဒါပေမဲ့, သူတို့အမှန်တကယ်သူ့ကိုနားမလည်ကြဘူး.
သူတို့သညျအမှနျတကယျကိုယ်တော်ကိုထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်၌တရားစိတျထဲမှာအဘယ်သူမျှသို့မဟုတ်ထိုမိန်းမသည်အကြွင်းမဲ့အာဏာအနန္တတန်ခိုးရှင်တစ်ဦးအဆင့်တွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတင်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်. သူတို့သူဟာသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၏ထာဝရတရားသူကြီးခဲ့သည်ကိုနားလည်ကြလျှင်ဘယ်သူမှအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူသောအမှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်အတူသူ့ကိုပေါင်းသင်းများကသူ့ကိုမလေးစားမယ်လို့. သူတို့ဟာသူကဘယ်သူမှမယ့်ကဲ့သို့သူ၏နာမကိုပတ်ပတ်လည်ဆမ်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော levity နှင့်မလေးစားတဲ့နှင့်အတူသူ၏နာမကိုအမှီပွုမူဆကျဆံမညျမဟုတျ.
သင်အမှန်တကယ်သညျယရှေုကိုမွငျပါဘူးသောအခါ,, သငျသညျသူမနှိုငျးယှင့်ကိုနားလည်. သင်အမှန်တကယ်ရှငျဘုရငျကိုသိသောအခါ,, သငျသညျသူ၏အခွင့်အာဏာမှတင်ပြ, သင်ကစိန်ခေါ်ကြပါဘူး. ဒါနဲ့ဆွဲနိုင်မှသာနိဂုံးချုပ်သူတို့သူဟာသူသည်များအတွက်ကိုယ်တော်ကိုမြင်ကြပြီမဟုတ်ကြောင်း.
ဒုတိယ, ယရှေုကိုသိကြသူလူအတက်ပြောဆိုရန်လိုအပ်ပါတယ်. သီခငျြးမြားနဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်များထဲမှာမင့်, ဒါပေမယ့်ညစာစားပွဲ၌, အ boardroom အတွက်, နှင့်စာသင်ခန်းထဲမှာ. အဘယ်ကြောင့်? ဒီအဝိဇ္ဇာနှင့် irreverence အဆိုတော်တွေမှထူးခြားသောမဟုတ်သောကြောင့်,. မဆင်မခြင်အနုပညာကကိုယ့်တဦးတည်းဟူသောအသုံးအနှုနျးဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ကအမှနျတရားမကျြစိကှတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှု၌နထေိုငျ (2 ကောရိန္သု 4:4).
ဒါကွောငျ့သငျသညျယရှေုကိုသိရလျှင်, သမ္မာတရားကိုသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုပြောပြ. ဘုရားသခင်နှင့်အတူ toyed ခံရဖို့မထားဘူး. သူကကိုးကှယျခံရဖို့င်, ကိုခစျြ, နာခံ, နှင့်ခံစား. သူကတကယ်င်. သူကအပြစ်တရားကိုမုန်းနှင့်ကွာလုပ်ဖို့သူ၏သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်. တကယ်တော့, ကျွန်တော်တို့ရန်ရှိသည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့သားတော်သည်အပြစ်ဖြေသောပြစ်ဒဏ်ကိုသေကိုယူ. ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အမြဲကိုယ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်နိုင်အောင်တဖန်ဘုရားသခင်ကသင်္ချိုင်းကနေကိုယ်တော်ကြီးပြင်း.
အခြားသူများပေါ်မှာဤဧဝံဖြတ်သွား! ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးပြုပြီး, ကျေးဇူးတရားနှင့်အတူအဲဒီလိုလုပျ. လူမှာအော်ဟစ်ရပ်တန့်ပါ, သူတို့နှင့်မေတ္တာရှင်စတင်. သငျသညျသူသည်အဘယ်သူသည်ယေရှုဖူးဆိုရငျ, သငျသညျကတခြားလူတွေထက်ပိုကောင်းပါတယ်ကြောင့်ထိုသို့မဖွင့်. ဘုရားသခင်သည်သင်၏မျက်စိကန်းသောမျက်စိဒါဟာဖွင့်လှစ်မယ့်အကြောင်းကြောင့်. ဆုတောင်းသူသည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများအတွက်တူညီပြုပါလိမ့်မယ်.
တဖန်သင်တို့သညျယရှေုကိုမသိကြပါလျှင်, သငျသညျကိုယျတျောသိမှရသင့်တယ်. သူဟာ ခဲ့. ကောင်းပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆည်းကပ်ခံထိုက်သောသူထက်နှင့်ပိုပြီး. ဘုရားသခင့လျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်ပဲအခြား dude တူသားတော်ကိုကုသရန်မတတ်နိုင်နိုငျကွောငျးကိုတစ်ခုတည်းတယောက်မျှမရှိင်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထာကျွန်တော်တို့ယေရှုအကြောင်းယုံကြည်ရာပေါ်အရင်း. ထိုအမှန်တရား, ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်၌သို့မဟုတ်မယုံကြည်ရှိမရှိ, ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်.
ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုမေးနေတဲ့ nonbeliever အဘယ်သို့င်? ဖန်ဆင်းရှင်, ထောက်ပံ့ပေးတဲ့, နှင့်တရားသူကြီး. အကြှနျုပျတို့ဖွင့်နှင့်ယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်လျှင် - ကယ်တင်ရှင်.
*ခွင: ငါသည်သင်တို့ကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောသီချင်းတွေကိုနားမထောငျကြောင်းအကြံပြုမဟုတ်ပါဘူး. သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကလူမြားကိုသငျ့လျြောသောသို့မဟုတ်အထောကျအကူမဖြစ်လိမ့်မည်ဟုနံဘာသာစကားပါရှိသည်.
ရှင်ဇိုအာဘေး • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သမတ, ငါတို့မူကား ပို. ပင်ကြောက်လန့်သည်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏မျက်နှာ၌ spits သူတစ်ဦးသည်လူအဘို့ဖြစ်သင့်သည်။” – ဒါကဝါကျဟာအလွန်အစွမ်းထက်သည်!
ဤဆောင်းပါးတွင်ခရီးစဉ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! အစဉ်မပြတ်ငါ Lyrics ကပုံမှန် CCM ချီးမွမ်းခြင်းကိုဂီတထက်အများကြီးပိုအကြောင်းအရာနှင့်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ခံစားခဲ့ရသောကွောငျ့ငါတကယ်ခရစ်ယာန် Hip-Hop ပျော်မွေ့.
ဖြစ်ချင်တော့, ငါရှိသောကြောင့်လိင်များ၏အဆက်မပြတ်ထပ်ခါထပ်ခါ Lyrics အကြောင်းအရာလောက Hip-Hop ကြိုက်တယ်ဖူးဘူး, မူးယစ်ဆေးဝါးများ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ, စသည်တို့ကို. ဒါကကိုယ့်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာခဲ့သည်မီကပင်ဟုတ်မှန်ခဲ့.
တကယ်တော့, ငါပန့်ခ်ကိုကြောကျနားထောင်ပြီးကြီးပြင်းခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်နေတဲ့ rocker ခဲ့သည်. ငါခရစ်ယာန် Hip-Hop ကိုတွေ့သောအခါ,, ငါအဲ့တာကိုကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်! ငါ့အဆွေခင်ပွန်းအစဉ်မပြတ်ငါကမကြိုက်ခဲ့ကတည်းကငါက Hip-Hop ကိုနားထောငျခဲ့ကွောငျးအံ့အားသငျ့ခဲ့ကြ, အနည်းဆုံးလောက Hip-Hop.
သင့်ရဲ့ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်နေတာအပေါ် Keep ငါငါ့အစ်ကိုလည်းရကြမည်! ဘုရားသခင်နှင့်ငါတို့ချစ်သောကယ်တင်ရှင်ယေရှု၏ဘုနျးတျောကို! :: D
Avery • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:56 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
CherishJesusLuv • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 5:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါနှလုံး၏စည်းစိမ်ထဲကနှုတ်ပွောသောသဘောတူ, ဒါကြောင့်သဘာဝသီချင်းတွေကိုစကားမြားကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်သွား ပတျသကျ. ဖြစ်သွားကြသည်.
ငါသည်လည်းအများအပြားမှ Country အဆိုတော်အဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့နှင့်အတူမသောက်လိမ့်မယ်အချို့သောတစ်ဦးအဖြစ်ယေရှုအကြောင်းစကားပြောကြောင်းထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်? yeah Ummm သူတို့သူ့ကိုမြင်မှန်လျှင်သူတို့နှိမ့်ချဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သောက်သုံးရေအကြောင်းကိုအများကြီးမစဉ်းစားမယ်လို့. ဒါမှမဟုတ်မိမိအထံတော်မှပုန်းရှောင်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်.
ငါသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းကိုလူတို့အားပြောဆိုရန်ကိုခေါ်ခဲ့ကြကြောင်းဤနေရာတွင်နှင့်သင်တို့နှင့်အတူအပေါ်ကိုမျှဝေချင်ပါတယ်. သူ၏ဝိညာဉ်တော်အားသူကလူတို့အားအကြှနျုပျကိုပစ်ချစကားပြောကြမယ်လို့ပြောတယ်. ငါမစုံလငျဖွစျပါ၏ငါကမ္ဘာက unstained နေဖို့ဖို့ကြိုးစားပါဘူး, နှင့်လည်းအခြားခရစ်ယာန်များကဲ့သို့ကြီးထွားလာနေပါတယ်.
ငါသည်ဘုရားသခင်၏ခံစားရနိုင်တယ်လို့တူအစဉ်မပြတ်ငါတောင်လူငယ်တစ်ဦးအဖြစ်အကြှနျုပျကိုကြည့်ခံစားခဲ့ရခဲ့. ငါကိုယ်တော်အားသီချင်းဆိုကြလော့မယ်လို့နှင့်သူ၏မေတ္တာတော်ကိုစဉ်းစားသောနေ့၌ပျောက်ဆုံးသွားရ. ငါတုန်းက 15 သခင်ဘုရားကိုစာသားသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါ့ကိုမိုးနဲ့ကျွန်မထိုနေ့ရက်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားလက်ခံရရှိ. အကြှနျုပျ၏နှုတျကိုအခန်းထဲစိတ်နှလုံးထဲမှာတခြားသူတွေကိုအပေါ်ခဲ့သည်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသုံးပြုခဲ့သည်. ထိုအခါသူသည်ငါ၌အသက်ရှင်ရန်ရောက်လာသောငါ့ကိုကာကွယ်မယ်လို့နှင့်အချိန်ပိုင်ခွင့်အခါငါ့ကိုပစ်ချစကားပြောကြမယ်လို့ငါ့ကိုပြောပြငါ့နှလုံးပစ်ချငါ့အားမိန့်တော်မူ. ငါ 9th တန်း၌ရှိ၏နှင့်ဤလူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းကွန်ဒုံး၏အပြည့်အဝအမှိုက်သံဗူးနှင့်အတူရောက်လာသောအခါငါသတိရ. ရောဘတ်အီး. Tyler TX အတွက် Lee က. သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပုံနဲ့လိင်ကိုရောက်စေမယ်လို့ကွယ်လွန်သူပြသ. ငါတို့သည်သူတို့လိုအပ်ပါကသူတို့ကကွန်ဒုံး၏သေးငယ်တဲ့အညိုအမှိုက်အိတ်ဖွင့်ဖြည့်သူတို့နှင့်ယူမှအခမဲ့ဖြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်. ကျွန်တော်မှန်ပြီးတော့သူတို့ကိုယူချင်ကြဘူးလျှင်သူတို့ကကျနော်တို့သူနာပြုများရုံးကိုသွားနှင့်လည်းအချို့သောအရနိုင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြခဲ့ကြ. ရတဲ့အခါသူတို့ကပြောပါတယ်,”လိင်သငျသညျအစဉျအမွဲဖြည့်ပါလိမ့်မယ်သောအကောင်းဆုံးအဆာဖြစ်ပါတယ်။” ငါ In-ရှေ့တပြင်လုံးကို9တန်းအတန်းအစား၏ထရပ်သည်ဤလူများနှင့်ကြားပြောစေခြင်း. “အဘယ်သူမျှမကဘုရားသခငျ၏သနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောသငျနှငျ့အစဉ်အမြဲငါဖြည့်ပါလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်၏။” ထိုအရပ်၌ယိုဖိတ်မှုပြီးစီးပြီးမှသည်အထိသူတို့ရုံးမှအကြှနျုပျကိုကရဲခေါ်ထုတ်ခဲ့. ငါအနည်းငယ်ကျောင်းသားများကိုငါနှင့်အတူတလျှောက်ရပ်သူမမှန်သည်ဟုဆိုသည်သတိရ. ဤသူကားငါ၏ခရီး၏အစအဦးဖြစ်ခဲ့သည်.
နောက်ပိုင်းမှာအပေါ်ဘဝအသက်တာအတွက်ငါရှိမသောက်နဲ့ကတ်ကိုဂိမ်းရာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာ. ငါဤအရပ်၌ငါမပြေးဖို့လိုအပျတူငါသည်ဤခံစားမှုငါ့နှလုံး၌ငါ့ကိုလွှမ်းခံစားခဲ့ရသတိရ. ငါကသူသိနိုင်ပုံကိုမသိခဲ့ပါကြောင်းကာရာအိုကေစက်အပေါ်တစ်ဦးလူသည်ငါ့နာမအပြောကိုစတင်သတိပြုမိနှင့်ငါ့အကြောင်းကိုအမှုအရာပွောဆိုခဲ့. ငါသူမလည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်အဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်လျှင်ငါသည်ငါ့သူငယ်ချင်းကမေးတယ်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နဲ့ကျွန်မဦးချိုသူ၏ဦးခေါင်းမှထွက်ကြွလာသည်ကိုမြင်ရနိုင်သတိပြုမိ, သူမမရှိ replied, ဒါပေမဲ့သူမကျွန်တော်တို့ကိုအဲဒီမှာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုစိတ်မသက်သာခံစားခဲ့ရကြောင်း. ငါထို့နောက်ဖြစ်ပျက်ဝိညာဏအရာကိုမွငျလြှငျခဲ့သည်ကိုသိ. ငါကပိုအမှုအရာထက်သောအံသွားနှင့်နှင့်ခြေသည်းသင်တုန်းကိုမြင်လျှင်, နှင့်အမှတ်မှာငါထွက်ရဖို့တံခါးဝသို့ပြေးလေ၏. တစ်ဦးမိန်းမတို့အားထုတ်လို့ခေါ်တဲ့ကာရာအိုကေ machine ပေါ်ရှိလူသည်ငါ၌ထားခဲ့ကြကုန်အံ့ငါ့ကိုအပေါ်တံခါးကိုပိတ်လိုက်ပြီးမ, သူမမတတျနိုငျသူကတံခါးကိုအလျင်အမြန်နှင့် In-ရှေ့အတွင်း၌ငါ့ကိုပိတ်ပြီးတံခါး၌ရပ်လျက်. ငါနောက်လာမည့်ဖြစ်ပျက်မှာပြီးပြည့်စုံရှော့ခ်၌ရှိ၏. ငါလက်ျာဘက်အရပ်၌ငါ့ကိုက်စားလျှင်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ugliest နတ်ဆိုးဤလူထဲကတစ်ဝက်လမ်းလာသည်ကိုမြင်, နှင့်ယခုအချိန်တွင်လှပသောအဖြူကိုဖုံးလွှမ်းစရာငါ့အခန်ဓာကိုယျတစျခုလုံးကိုကျော်ဆင်း လာ. နှင့်လက်ငင်းအတွက်နတ်ဆိုးဒီခေါ်တာပါခန္ဓာကိုယ်မှပျံသန်း. ထိုလူရပ်တံခါးကိုချကျဆင်းခဲ့သည်တစ်ဦးထိုင်လျက်အနေအထားသို့ငါမျက်ရည်သူ၏မျက်နှာကိုနှိမ့်ချ run သည်ကိုမြင်လို့မရဘူး. ငါထို့နောက်ထိုအရပ်၌ထိုင်လျက်မခံခဲ့ရလျှင်အဖြစ်ပင်ဤသူသည်လွယ်ကူသောအဖြစ် In-ရှေ့ထိုင်လျက်နှင့်အတူတံခါးကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်, နှင့်မြန်ငါသည်ဤတိုက်ခန်းရှုပ်ထွေးတဲ့ထဲကတတျနိုငျသအဖြစ် run ဖို့စတင်ခဲ့.
ငါပင်စှဲသောသူတို့၏နတျဆိုးခဲ့ကြကြောင်းလူတို့နှင့်အတူအခန်းတခန်းထဲသို့ငါ့ကိုထားရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ကျနော့်ဘဝမှာလူများအပေါင်းတို့မှငါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စီးဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်ဤအချက်မှာ. ဒါကြောင့်ငါလွှတ်ဂိုဏ်းနှင့်ဆိုးလွှမ်းမိုးမှုမှငါ့လမ်းတိုက်ခိုက်ခဲ့. ငါတကယ်ဤအချက်မှာဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျ၏ဘဝတစျခုလုံးကိုမပေးခဲ့ပါဘူးနှင့် add ချင်ပါတယ်ငါသည်လည်းဒီဧရိယာ၌လေ့ကျင့်ရေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းကို. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်က, ငါသည်ငယ်စဉ်ကပင်သော်လည်းဤနည်း၌ငါ့ကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်ဤမျှလောက်ကရုဏာကျေးဇူးတော်လိုအပ်နေ, ဆဲဤနေ့ငါ့စိတ်ကိုနှောက်ခြောက်ခေါင်း. သူ၏မေတ္တာ Amazing ဖြစ်ပါသည်. ငါသာငါဝိညာဉ်ရေးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်တကတခြားနတ်ဆိုးဝိညာဉျကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြ. ငါ hwy ဆင်းကားမောင်းခဲ့ 155 ငါကကားတစ်စီးပန်းကန်သတိထားမိ “Vampire” ဒါကြောင့်အပေါ်, ငါကားအောင်မြင်ပြီးသကဲ့သို့ငါကားမောင်းသူမှာကြည့်ရှုနှင့်ခေါ်တာပါကိုယ်ခန္ဓာ၌တရားအဲဒီမှာနတ်ဆိုးသည်ကိုမြင်. ငါလွှတ်ဒီတစ်ခုကနေလမ်းဆင်းအပေါ်ရရှိရန်အရှိန်မြှင့်.
ငါ့အသက်ကို၌ဘုရားသခင်ရဲ့အကာအကွယ်၏နောက်ဥပမာ. ငါသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားလက်ခံရရှိပြီးနောက်ငါအချို့သောအချိန်နုပျိုစဉ်အခါကကျနော် Louisiana တစ်ဦးကိုတက်ခူးထရပ်ကား၏နောက်ကျောအဆုံး၌စီးနင်းခဲ့ငါနှင့်နောက်ကျော၌အလွန်ငယ်ရွယ်သုံးဝမ်းကွဲအားလုံးနှင့်ရှေ့မှောက်၌သုံးဝမ်းကွဲခဲ့. ငါဝိညာဉ်တော်သည်သူသည်မိမိလက်၌လောကဓာတ်လုံးရှိပါတယ်သီခငျြးဆိုမှငါ့ကိုအရွှေ့ခံစားခဲ့ရ, ထိုအခါငါထနှငျ့ဘုရားသခငျမှငါ့လက်ကိုထမွောကျ. နောက်ကျော၌ငါ့ဝမ်းကွဲသူသီဆိုသည်အဘယ်ကြောင့်ကဲ့သို့ငါ့ကိုကြည့်နေကြတယ်အဖြစ်ခဏမှာ, ကားမောင်းခဲ့မူသောငါ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်ထရပ်ကားဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးကျွန်တော်တစ်ဦးကွေး၌ရှိကြ၏နှင့်ထရပ်ကားဖြောင့်အပေါ်လာမယ့်ရှေ့လမ်းသွားခဲ့. Said ကားမောင်းသူကငါ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲ, “ချစ်ခင်ရပါသောဘုရားသခငျသညျအဘယ်သို့ငါပြုလေပြီ။” နှင့်ရှေ့၌ငါ့အခြားဝမ်းကွဲကပြောပါတယ်, “ဘုရားရေ။” ငါ့ကိုဘုရားသခင်အားငါ့လက်ကိုရုပ်သိမ်းပေးရေးနဲ့သီဆိုခဲ့ပါတယ်. ငါလှပတဲ့မိုးဦးညွှတ်လက်မျဉ်းစောင်းမိုဃ်းတိမ်ကိုတစ်ချက်ချင်းဆင်းလာသည်ကိုမြင်ခြင်းနှင့်ငါတို့နှင့်အတူတိုက်ပေါ်ဦးသောထရပ်ကားကိုဖယ်ရှား. ငါဘာမှမဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်အတိုင်းလမ်းဆင်းကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်နောက်ကွယ်မှထရပ်ကားကိုမြင်လျှင်မှတ်မိနေ. ကျွန်တော်တို့နောက်ကျောကိုငါ့အဒေါ်မှအိမ်ပြန်ရောက်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့ဝမ်းကွဲကပြောပါတယ်, “မြတ်နိုးကိုထရပ်ကားထဲမှာခဲ့မယျဆိုရငျငါတို့ရှိသမျှသည်အသေကောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။” သူတို့အဲဒီမှာနောက်ကျောလုပ်နေခဲ့ရာငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်ငါသီချင်းဆိုခြင်း hes ကိုမိမိလက်၌ရှိလောကဓာတ်လုံးရတယ်ဟုပြောသည်. အကြှနျုပျ၏ဝမ်းကွဲငါကြှနျုပျတို့အားလုံးမိမိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတှကျဘုရားသခငျကိုကွောကျရှံ့နေဆဲထိုနေ့ရက်များမှာ. ငါကမဟုတ်ခဲ့သူတို့အားကြားပြော “ငါ့ကို” ဒါပေမဲ့ “ဘုရားသခ” ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ထားခဲ့သူ.
ငါသည်ဤထွက်ရှိသူတစ်ဦးဦးအားပေးမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုရှိသမျှနှင့်အတူ, ယရှေုသညျ Loving ရုံအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး “ကိုမြင်လျှင်” ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာ၌မင်္ဂလာသေးမြင်မမူသောသူကိုဆဲယုံကြည်သည်ကပြောပါတယ်သိဘို့တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်. ထို FYI ကြောင်းကျမ်းစာ၌ပါသောအာသာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မဒီကိုမျှဝေချင်တယ်ငါသညျယရှေု Love ပွောဆို, ငါယုံကြည်နှင့်သူ၏ကာကွယ်မှုမှသက်သေခံ,သနားခြင်းကရုဏာ, နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ. ငါကလူတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရင်, သူကသူ့ချစ်ရာသခင်သည်အဘို့ပြင်ဆင်နေသည်တစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြစ်၏သိလို. သူ့ဘုရားကျောင်းအဖြစ်ကျနော်တို့ကသူ့ချစ်ရာသခင်သည်နှင့်သူကသငျသညျအကြှနျုပျနှငျ့ဤသူ၏ပေါ်ထွန်းဘို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ထားရန်စာဖတ်ခြင်းမည်သူမဆိုလိုလား, ထိုအရပ်၌အပြစ်မှနောင်တရနှင့်ကိုယ်တော်နောက်သို့လိုက်ရန်. ငါသည်သင်တို့၏ဂီတခရီးစဉ် Love. ဒါဟာငါ့ကိုပတ်ပတ်လည်ငါ့အသက်ကိုနှင့်အခြားသူများကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်. ငါသည်သင်တို့ကို, Matt သွင်းထားမှသာဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဆုတောင်း 6:33 အလေ့အကျင့်သို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓမ္မရာဇဝင်ကောင်းမြတ်ခြင်းမှသက်သေခံတစ်ဦးအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်. ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကိုမြော်လင့်သည်အတိုင်းငါနှင့်ငါ့ငယ်ရွယ်မိသားစုခံစားနိုငျစကားလုံးတွေကိုမေတ္တာရှင်နှင့်ကောင်းသောစည်းချက်အဘို့ဤမျှကျေးဇူးတင်ပါ၏. မြတ်နိုး :) ငါ UNASHAMED AM!
မဿဲ 6:33 ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုရှာကွ, နှင့်သူ၏ဖြောင့်မတ်; လူအပေါင်းတို့သည်ဤအရာတို့ကိုသင်တို့ဆီသို့ဆက်ပြောသည်ခံရကြလိမ့်မည်.
CLEAN MIMSHACH • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:57 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီရက်ပ်အကြောင်းပြောဆို . သူကတစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ် “ယရှေုသညျလမ်းလျှောက်” သငျသညျရှိသည်အဖြစ်က Hip-hop စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရူပါရုံကိုသျောအဘယျဖြစ်ပျက်? “ပျက်ကွက်” သငျသညျဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်လိုလျှင်. မှားသွားတယ်အဘယျသို့?…ဤရွေ့ကားသင်တို့၌အဖြေကိုရှာပါရန်လိုအပ်ပါတယ်မေးခွန်းများကိုများမှာ.
ပြန်ထိုင်ရင်းနှင့်ယေရှုအားဖြစ်ပျက်ရဲ့အဘယျသို့ခွဲခြားစိတ်ဖြာ “ပုံရိပ်” တစ်ဦးအရာကိုပြောင်းလဲ wont. cant သညျယရှေုကိုပြောင်းလဲကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကို၏ကိစ္စအဖြစ်’ ယရှေု!!.
YMCMB မှစံချိန်တင်သဘောတူညီချက်ရသွားပြီးတဲ့ကုန်ကြမ်းထုံးစံ၌အမှန်တရားကိုဟောပြော, သငျတို့သတဲ့ရက်ပ်အဖြစ်ရှင်သန်လိမ့်မည်ရှိမရှိကြည့်ရှုပါ။”ကမ္ဘာပေါ်တွင်စကားကိုနားထောငျဖို့လိုသည်အဘယ်သို့ဆို” စီးပွားရေးလုပ်ငန်း…smh
သူတို့ကဒါလောကသုံးပါနှင့်စနစ်များနေကြတယ်: ပိုက်ဆံရယူခြင်း, fornicating, စသည်တို့ကို. ယရှေုယနေ့သူတို့အားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်တော်တိုင်ကိုထင်ရှားစွာပြပင်လျှင်ချဲ့ထွင်ဖို့, သူတို့မသိစိတ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ရှိအဟောင်းနည်းလမ်းများသို့ချော်လိမ့်မည်.
ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်သို့တစ်ဦးအဖြစ်ပြဿနာရဲ့အမြစ်ကိုဖကျြဆီးလိုငှါပြုသင့်၏ပြုပါ “ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သော” ဖြစ်ခြင်း. သူတို့ရှေ့မှာအမကြားပါဘူးအဘယျကမ်ဘာကိုပြောပြပါ။. ယေရှု၏တစ်ဦးကပစ္စည်းကိုသက်သေပြ’ တည်ရှိမှု, တန်ခိုးတော်နှင့်ဘုနျးတျောကို “အသစ်အလင်း”
က Nicholas J ကို. Gausling • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:58 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သတ္တုတွင်း၏အချို့မိတ်ဆွေများကိုမကြာသေးမီကမုသာအသိအမှတ်မပြုဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသစ်စာတရားကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့သင်ယူခြင်းအားဖြင့်ကြောင်း commented; ငါသည်ပညာတရားအားဤနေရာတွင်သက်ဆိုင်ကြောင်းထင်. တဦးတည်းကဒီအဓမ္မဂီတဆန့်ကျင်တဲ့ကင်ပိန်းဖန်တီးခြင်းအကြောင်းကိုသွားနိုင်, ဒါပေမယ့်ပင်ပိုကောင်းသညျဘုရားသခငျဗဟိုပြုဂီတထုတ်လုပ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
Avery • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:58 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကြောက်မက်ဘွယ်သော, ခရီးစဉ် Lee ကမှကောင်းထင်ထွက် perspecitve!
ကေသီ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
CLEAN MIMSHACH • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အိုကေ. ထိုသို့အချိန်ဖြစ်ပါသည် “ခရစ်ယာန်အဆိုတော်တွေဟာ” သူတို့၏ကဲ့ရဲ့ဖို့ (ကမ္ဘာ) ဘုရားသခ(စာတန်). ကအဖြစ်ဟာသူ့ရဲ့အဖြစ်ရိုးရှင်းတဲ့.
သင်တို့သည်ငါတို့၏သညျယရှေုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ / disrespected လျက်ရှိသည်ထင်လျှင်သင်တို့အဆိုတော်တွေလည်းစော်ကား / နှစ်ကြိမ်စာတန်မာလမ်းမလေးစားခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏စာတန်အာဏာမဲ့ဆပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအနေအထား၌ရှိကြ၏.
ဒေါက်တာ. Ebony Utley • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အကြှနျုပျ၏စာအုပ် Rap ဂီတနှင့်ဘာသာတရားအတွက်: အ Gangstas သညျဘုရားသခငျကိုနားလည်ခြင်း, ငါသူတို့ဖြစ်ကြသည်တူသူကိုညှဉ်းဆဲသောကြောင့်အအဆိုတော်တွေဟာယရှေုသညျအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတွေ့မြင်ဘယ်လိုအကြောင်းရေးဖို့. ထွက်ခွာသည်. http://rapandreligion.com
Cece • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 8:38 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟုတ်ကဲ့! ဒေါက်တာမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. Utley! ငါနောက်ဆုံးကဆြုံးသငျသညျမြောက်ကိုရီးယားပန်းခြံတက္ကသိုလ်မှစကားကိုကွားနှင့်ဤဆက်သွယ်မှုအားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့.
တာရိန်းစ်ကိုအာဗြဟံ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
wow မည်…..ငါသည်သင်တို့ကိုသင်တို့၏အကြံအစည်အားဖြင့်ထားရန်စကားလုံးများကိုအသုံးပြုဘယ်လိုအစွမ်းထက်နှင့်မသိမသာတန်ဖိုးထားကြပါ [ဘာလဲသင့်ရဲ့ဖန်ခွက်ထဲမှာပြသထားတယ် :) ]…ငါအလားတူထင်မြင်ချက် voice ချင်တယ်, သင်အမှန်တကယ်ကောင်းသောဥပမာကိုအသုံးပြုပြီးဤခေါင်းစဉ်သို့ရှင်းလင်းပြတ်သားဆောင်ခဲ့ကြ၏.
MoNsTroSity • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
နိုင်ငံများစွာနှင့်မင်းများစွာသောဘုရားတို့ကိုရှိ. (1Co8:5) aHaYah အာရှာခရိုင် aHaYAH, ကိုပြောပြပါ YISRAEL ငါ AM တော်မူသည်၏ကလေးများသင်တို့ကိုစေလွှတ်. (Ex.3:14) & Avraham ၏ထိုမှတပါးထိုအယ်လ်, Yitschak, ဎ Yaacov (Ex.3:15).. YmmanuwEL, YesHaYAH HaMashiyach.
ဆုတောငျးပါ & သင့်ရဲ့ကမျြးစာကိုအပြင်းအထန်ဖတ်ခြင်းနှင့် YisraEl မည်မဟုတ်ပါ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားသည်ကောင်းကင်၌ငါတို့အဘတည်းဟူသောသောအေအာရ်တီကနေအဖြေကိုထုတ်ဖေါ်… ကယ်တင်ခြင်းကယ်တင်ရှင်သူ၏ ppl ပြန် comin ဖြစ်ပါတယ်… “YisraEL ၏တဆယ်နှစ်မျိုး” & aHaYAH ၏စကားကိုယုံကြည်သောသူတို့ကို။. Yesha အဘို့အရှာဖွေရေး – တစ်ဝှက်ထားလျက်ရှိသောဘဏ္ဍာအဖြစ်ကိုကယ်တင်ခြင်း… aHaYAH ကောင်းကြီးပေးတော်မူ – သူက IS အဘယ်သူသည်, သူကားအဘယ်သူဖြစ်တယ်, & လာမှ IS အဘယ်သူသည်သူ. (Rev1:4) ထိုနည်းတူလာ, YesHaYAH. အာမင်.
RJSALEZ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုမေးနေတဲ့ nonbeliever အဘယ်သို့င်? ငါနောက်ကျောသူတို့ကိုမေးမြန်းပွောဆို, တစ်ဦးကိုဘုရားသခင်အားတစ်ဦးမဟုတ်သည့်ယုံကြည်သူဆိုတာဘာလဲ? ;)
Empress • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:02 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယနေ့တစ်ခုခုရေးဖို့ငါ့ကိုမှုတ်သွင်း, အချို့အပျက်သဘောလူသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များနှင့်သမ္မာတရားကိုဟောပြောထံမှသင်တို့ယိမ်းမသွားပါစေပါဘူး. ငါသည်သင်တို့၏အာရုံကြောအပေါ်ရရန်ကြိုးစားစေခြင်းငှါအချို့ထွက်ရှိရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရ. ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးခြားနားချက်လုပ်နေပါတယ်ကတက် Keep ဆိုဒီမှာဖွစျပါ၏
MsB • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤလောက၏လျှင်တုန်းက, ငါကြောင့်အနုပညာဖန်တီးမှုနှင့်အဓိကအားဖြင့်ကွောငျ့, အကြောင်းအရာ၏လေးလံသောဟစ်ဟော့ဝါသနာအိုးခဲ့သည်. နားထောင်နှလုံးအယူခံစကားမှ gravitate. ဒါကြောင့်, အနှစ်သာရထဲမှာ, အဖြစ်ကြာမြင့်စွာမိုက်စိတ်နှလုံးကိုရှိပါတယ်အဖြစ်, ထိုသတင်းစကားကို gravitate သောသူတို့သည်လည်းထိုအရပ်၌ဖြစ်ရလိမ့်မည်. ဤဆောင်းပါးသည်လို့ယုံကြည်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်အသိပေးစာတာဝန်ထမ်းဆောင် “ကျွန်တော်တစ်ဦးတောင်ထိပ်ပေါ်မှာမြို့ကတက်လင်းစေကြ” ကျွန်တော်သူတို့ပျောက်ခံစားရတဲ့အခါလူတွေက '' ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့် hit ချင်’ SO ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်သောသခင်ဆယ်ဘို့တဘို့သူတို့ကို navigate နိုငျကွောငျး. သင်ဤဆောင်းပါး၌အကြှနျုပျတို့၏တစ်ဦးတည်းသောမစ်ရှင်ဖော်ပြထားပါတယ်- thanx! P.S. ခွက်ကိုဥဒါဟရုဏ် LOVE!!!! Awesome. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
ဖေါ်ပြ: Rap ဂီတအကြောင်းသူပုန်ဟာ Rapper ခရီးစဉ် Lee ကဆွေးနွေးပွဲ & ဘာသာ - ဟုတ်သည် FM ရေ
UnveilDa1 • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 1:32 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါက Mr ၏အတွေး process ကိုခစျြတဲ့. Lee က, ငါခုန်ထံမှခရီးစဉ်၏နောက်လိုက်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်, သူကမေးခွန်းမေးတဲ့အခါ “ဒါကြောင့်ဘယ်လိုငါတုံ့ပွနျသငျ့? ငါသည်သူတို့၏ဂီတသပိတ်မှောက်ကြဖို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုစတင်နိုင်. သို့မဟုတ်, တစ်ရက်ပ်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်, ငါအသက်အရွယ်များအတွက်ပက်ပက်စက်စက် diss စံချိန်ကိုရေးသားနိုင်. ငါသည်သင်တို့ကိုသူတို့အားချဉ်းကပ်၏တစ်ခုခုကိုမှန်တယ်မှားတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ကြကုန်အံ့ပါလိမ့်မယ်။” ငါသည်တ diss စံချိန်နှင့်အတူတစ်ဦးတုန့်ပြန်အလွန်သင့်လျော်သည်ထင်, ဒါဝိဒ်ကိုငါဂေါလျတ်ကိုပြုအတိအကျအဘယ်သို့ပြုရန်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်သည်. သူကသူ့ဘုရားဆန့်ကျင်စကားပြောခဲ့သောသူ၏နှုတ်ကိုပိတ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်. အခုတော့ရှိပါတယ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့အံ့သြဖွယ်ဘုရားပေးခြင်းအခွက်တဆယ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူ, ငါစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များများ၌ဖို့ရွှေအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ရှုမြင်သည်.
ဆာရှာ • သြဂုတ်လ 21, 2013 တွင် 4:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
keron • သြဂုတ်လ 27, 2013 တွင် 3:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်